Emọs 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 “Nụrụnụ okwu a, unu nne ehi Beshan,+ ndị nọ n’ugwu Sameria,+ ndị na-erigbu ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha,+ ndị na-echi ndị ogbenye ọnụ n’ala, ndị na-asị ndị nna ha ukwu, ‘Wetanụ, ka anyị ṅụọ!’ 2 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova aṅụwo iyi n’ịdị nsọ ya,+ sị, ‘“Lee! Ụbọchị na-abịakwasị unu. Ọ ga-ejikwa nko nke onye na-egbu anụ kolie unu elu, jirikwa nko azụ̀ kolie ndị fọdụrụ n’ime unu elu.+ 3 Unu ga-esi n’ebe a kwaturu akwatu na mgbidi pụọ,+ onye ọ bụla ga na-aga n’eleghị anya n’azụ; a ga-atụgakwa unu na Hamọn,” ka Jehova kwuru.’ 4 “‘Bịanụ na Betel mebie iwu.+ Na-emebinụ iwu ọtụtụ ugboro na Gilgal.+ Wetanụ àjà unu n’ụtụtụ; wetakwanụ otu ụzọ n’ụzọ iri unu n’ụbọchị nke atọ.+ 5 Sureenụ achịcha koro eko ka ọ bụrụ àjà ekele,+ kpọsaakwanụ onyinye afọ ofufo+ unu na-enye; kwusaanụ ya, n’ihi na ọ bụ nke a na-adị unu mma, unu ụmụ Izrel,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. 6 “‘Mụ onwe m kwa mere ka ezé unu na-acha ọcha+ n’obodo unu niile, meekwa ka ụkọ ihe oriri dị n’obodo niile unu bi;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru. 7 “‘Mụ onwe m kwa gbochiri oké mmiri ozuzo izoro unu mgbe ọ fọrọ ọnwa atọ ka oge owuwe ihe ubi ruo;+ m mekwara ka mmiri zoo n’otu obodo, ma emeghị m ka mmiri zoo n’obodo ọzọ. Mmiri zoro n’otu ibé ala, ma ibé ala nke m na-emeghị ka mmiri zoo na ya kpọrọ nkụ.+ 8 Obodo abụọ ma ọ bụ atọ daara gaa n’otu obodo ịga ṅụọ mmiri,+ ha aṅụjughịkwa afọ; ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru. 9 “‘Emere m ka ihe unu kụrụ kpọnwụọ, meekwa ka ihe unu kụrụ maa ebu.+ Unu mere ka ubi vaịn unu na ubi unu ndị ọzọ dị ọtụtụ, ma egú ripịara osisi fig unu na osisi oliv unu;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru. 10 “‘Ezitere m ọrịa na-efe efe n’etiti unu, ụdị nke rịara Ijipt.+ Eji m mma agha gbuo ụmụ okorobịa unu,+ dọrọkwa ịnyịnya unu n’agha.+ Emekwara m ka ísì ọjọọ nke na-esi n’ebe unu mara ụlọikwuu siba unu n’imi;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru. 11 “‘M kwaturu ala unu, dị ka mụ onwe m bụ́ Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra.+ Unu wee dị ka nkụ a lọpụtara n’ọkụ;+ ma unu alọghachikwuteghị m,’+ ka Jehova kwuru. 12 “Ya mere, ọ bụ ya ka m ga-eme gị, Izrel. Ebe ọ bụ na m ga-eme gị ihe a, jikere izute Chineke gị,+ Izrel. 13 N’ihi na, lee! Onye kpụrụ ugwu niile+ na Onye kere ifufe,+ Onye na-agwa mmadụ ihe ọ na-eche n’echiche,+ Onye na-eme ka chi ọbụbọ ghọọ ọchịchịrị,+ Onye na-aga ije n’ebe ndị dị elu n’ụwa,+ Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha bụ aha ya.”+